Tiknoolajiyadda geospatial, kaalinteeda iyo muhiimadda ay ku leedahay qaab dhismeedka IT-ga ee Waaxaha Gaadiidka.
Tiknoolajiyadda geospatial. Waxaa loo qaatay dhammaan tiknoolajiyada loo adeegsado si loo helo, loo maareeyo, loo lafaguro, loo muujiyo loona faafiyo labadaba xogta iyo macluumaadka la xiriira goobta shay, waxay ka gudubtay fikraddeedii ugu horreysay ee saddex geesood oo asal ahaan ka kooban GIS, GPS iyo Aragtida fog (RS in Ingiriis) oo lagu daro tiknoolajiyadaha soo baxaya ee adeegsanaya qayb ...
Markii aan aqrino aragtiyaha kaladuwan ee taageeraya isgaarsiinta ay sawir-gacmeedku ka kooban yahay, saynis ahaan si ay u metelaan ifafaale juqraafiyeed, iyo farshaxan si loo siiyo macluumaadkan sharraxaadda lagama maarmaanka ah, waxaan ogaanay in xilligan aan ku nool nahay ay ku jiraan ficillo badan oo nolol maalmeedka ah. halkaas oo aan u adeegsanno jaangooyo ahaan ficil ahaan
Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, egeomates My
Qaybta Isbarbardhiga alaabta
Juquraafi ahaan isku xirnaanta hal meel, dhammaan qiimaha dib u eegista wax soo saarka ee GIM International iyo Hydro International. Geo-matching.com waa websaydh isbarbardhiga badeecad madaxbannaan oo loogu talagalay qalabka iyo barnaamijyada xirfadleyda ee cilmiga geomatics, hydrography, iyo cilmiga la xiriira. Waxaan dooneynaa inaan ku hogaaminno martidayada nalka lab ...
Ogaanshaha sida unugyada ismaamulku u shaqeeyaan maanta waxay na siinaysaa qanacsanaanta inaan ogaanno asalka waxyaabaha laakiin sidoo kale ka faa'iideysashada horumarka cusub. Waxay ku dhacdaa kuwa naga mid ah oo garanayey hababka dhaqameed ee sawir qaadista, iyo xaddidooda aadka u xun; markii wareegga qabashada, khaldamaynta, qaabaynta iyo soo saarista badeecadda u dambaysa ay qaadatay toddobaadyo,…
Waa wax caadi ah, marka la iibsanaayo qalabka sahaminta, waxaa loo baahan yahay in la sameeyo isbarbardhig GPS, wadarta saldhigyada, sofweerka, iwm. Geo-matching.com waxaa loogu talagalay taas. Geo-matching waa goob lagu magacaabo Geomares, isla shirkaddaas oo soo saarta majaladda caalamiga ah ee GIM. Haddii aan xusuusanno, mudnaanta weyn ee joornaalkan ayaa ku jira ...
Kani waa magaca Koowaad Ibero-American Congress of Topographic, Geodetic iyo Geomatic Engineering oo ka dhici doona Jalisco, Mexico. Munaasabadda waxaa dhiirrigelinaya 11 Kulliyadood oo reer Mexico ah oo isugu jira Injineerro isku dhafan, waxayna noqon doontaa Oktoobar 16 illaa 18, 2013. Ujeeddada guud waa in la qaabeeyo aragtida cilmiyadan ...
3 Majalado iyo 5 waayo-aragnimo oo ku saabsan geomatis
Waa waqtigii la hubin lahaa joornaalada qaarkood oo daabacaaddoodii u dambeeyay soo baxeen; halkan waxaan uga tagayaa ugu yaraan waaya-aragnimo xiiso leh oo ka muuqda daabacaaddii ugu dambeysay ee majaladahaas. Geoinformatics 1. Khibradaha isticmaalaha ee isticmaalka Source Source GIS Software. Waxa xiiso leh in la akhriyo qodobkan, oo ina tusaya waxa ...
Waa maxay Bentley iyo Trimble ilaa?
Tani waxay umuuqataa saadaasheydii April Fool, laakiin maahan. Dhowr saacadood ka hor heshiis wada shaqeyn ayaa si rasmi ah loo soo gaarsiiyay kaasoo aan wax ka maqalnay daaha gadaashiisa, taasina waxay naga dhigeysaa inaan ka fikirno waxa ka dhex dhici kara labada shirkadood ee Bentley Systems iyo Trimble Dimensions.
GeoInformatics waxay nagala yaabisay bishan daabacaad ay ku muujineyso 49 xarumood oo kaladuwan oo jadwal isbarbardhig ah oo waxtar weyn u yeelan kara kuwa u baahan inay go'aan gaaraan xilliga iibsiga, iyo sidoo kale inay la socdaan moodel leh ku soo kordhayay dhowr ...